'The Witcher: Nightmare of the Wolf' Debuts Mampientam-po voalohany!
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'The Witcher: Nightmare of the Wolf' Debuts Mampientam-po voalohany!
Vaovao Mahafaly Fialam-bolySarimihetsika mahatsiravinaNetflix (sarimihetsika)Tranofiara (sarimihetsika)
by Waylon Jordan Jolay 21, 2021
The Witcher: nofy ratsy an'ny amboadia dia efa hanomboka amin'ny premiere amin'ny Netflix amin'ny 23 aogositra 2021, ary nandatsaka tranofiara feno fotsiny ilay streamer izay manisa antsika ny andro!
Toy izao ny famintinana an'ilay horonantsary mihetsika:
Ny tontolon'ny The Witcher dia mivelatra amin'ity tantara niavian'ny anime ity: Talohan'i Geralt dia nisy ny mpanolotsainy Vesemir - mpanao ody tanora mahery vaika izay nitsoaka ny fiainam-pahantrana mba hamono ireo biby goavam-be. Saingy rehefa manomboka mampihorohoro ny fanjakana goavambe ara-politika iray ny dragona vaovao hafahafa, i Vesemir dia nahita traikefa nahafinaritra nanery azy hiatrika ireo demonia tamin'ny lasa.
Ho fanampin'ny tranofiara, manana lisitry ny mpilalao voamarina izahay avy amin'ny fe-potoana farany ao anatin'izany i Theo James (The Divergent franchise) as Vesemir, Lara Pulver (The Alienist: Anjelin'ny maizina), Graham McTavish (Castlevania), sy Mary McDonnell (Battlestar Galactica).
The Witcher: nofy ratsy an'ny amboadia dia iray amin'ireo tetik'asa fihodinana roa avy The Witcher andiany starring an'i Henry Cavill izay nambaran'ny Netflix. The Witcher: Ra niandohana, andiany hetsika mivantana iray hafa napetraka 1200 taona talohan'ny zava-niseho tamin'ny andiany lehibe dia hitantara ny famoronana ilay prototype Witcher voalohany. Michelle Yeoh (Milkshake am-basy) dia vao tsy ela akory izay no nambara ho iray amin'ireo kintan'ireo andiany ireo.
The Witcher mpamorona, Andrzej Sapkowski dia mpanolotsaina amin'ny tetik'asa Netflix rehetra mifototra amin'ny tantarany sy ny tantarany.
Zahao ilay tranofiara raha The Witcher: nofy ratsy an'ny amboadia etsy ambany, ary ampahafantaro anay raha mijery ianao rehefa milatsaka amin'ny sehatra streaming amin'ny volana ho avy!
Andrzej SapkowskiGavin McTavishLara PulverMary McDonnellNetflixThe WitcherThe Witcher: NIIMEmare an'ny amboadiaTheo JamesWaylon Jordan
'Chucky' dia nametraka ny andraikitry ny tanora sy ny ratsy Charles Lee Ray
Neil Gaiman's 'Anansi Boys' amin'ny fampandrosoana ho andiany ao Amazon